Indawo yezeMbali 3 bedrm Ikhaya! "INDLU ENKULU" - I-Airbnb
Indawo yezeMbali 3 bedrm Ikhaya! "INDLU ENKULU"
Sion Farm, St. Croix, U.S. Virgin Islands
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguGanesh
Indlu Enkulu-Indlu encinci yebhoutique yanamhlanje efakwe umtsalane wembali! Amagumbi okulala ama-3, iibhafu ezi-3.5 zekhaya eziphambili ngoku ziyafumaneka ukuba zirente. Ngaphambili ibiyirenti yesigqeba kwaye ngoku iyafumaneka kuluntu.
*Igumbi lokulala eli-3 ngalinye linebhafu yabucala * Yahlulahlulwe iiyunithi ze-AC kuyo yonke * I-Intanethi engenazingcingo * Ikhitshi leGourmet * Umabonwakude * Ifriji ye-Sub Zero kunye nefriji yewayini/isiselo * Iwasha / Isomisi * Idama elijonge kwizibuko laseChristiansted * I-Barbeque Grill * Ukuqhuba okufutshane ukuya edolophini naselwandle ( ~8 imiz)!
Ubunewunewu ezandleni zakho
Ipropathi isagcina imbali etyebileyo yoyilo, ifakwe kwizinto zale mihla kulo lonke. Ibiligugu lenkcubeko kule minyaka itsala umdla, abaphathi kwihlabathi liphela, ukubamba iminyhadala ekhethekileyo, kunye nokurenta kwivilla yabucala.
Yonke le ndawo ihleli kwiihektare ezi-3 ezigcweleyo kwaye yonwabele iimbono ezintle zonxweme olusemantla, empuma, nakumazantsi! Yonwabela ukuphuma kwelanga kweTropiki ukusuka kumgangatho wedama kwaye ubukele amaza egqabhuka kulwalwa lweChristiansted. Okanye phumla nje kwichibi lethu lamanzi anetyuwa ecwengileyo okanye utsibe kwi-tub eshushu kwaye wonwabele iglasi yechampagne. Igumbi lakho lokulala libandakanya iscreen esisicaba seTV yeHD kunye neyunithi yeA/C ethe cwaka.
Kukho abalandeli besilingi kwigumbi ngalinye kunye nomgangatho omtsha we-travertine tile kulo lonke igumbi. I-TV ye-Cable kunye nenkonzo ye-intanethi ye-Wi-Fi ekhawulezayo zonke zibandakanyiwe.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo libonisa uluhlu lwegesi, izixhobo zentsimbi engatyiwa kunye neetops ezintsha zegranite. Igumbi lokuhlala elitofotofo libandakanya iscreen esicaba 80 intshi HD TV.
Ulindelwe ngumhlaba ochumileyo wetropiki, ugcwele nge coconut imithi yesundu, izityalo zephayinapile, iAvocado, iApile yeswekile, imithi yePapaya, kunye noMthi weMango emazantsi epropathi. Ukubuyela kwakho kweTropiki yaseCrucian ikulindile!
Sifumaneka malunga nemizuzu engama-20 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kwaye sicebisa ukuba urente isithuthi ukuze uhlale.
Enye yezinto esizithandayo malunga nekhaya lethu lesiqithi kukuba esi siqithi sineendawo zokutyela EZIYONAYO. Uyimizuzu yokuqhuba ukuya edolophini, enezindlu: Iklabhu yeBombay, iHamilton's, iRum Runners, iShuppes, kunye nemizuzu emi-4 kuphela yokuqhuba ukuya eSugar Beach kunye neLe Cuisineer Restaurant.
Ibhedi enkulu eyi-1, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
Indawo, indawo, indawo!
I-Oasis Luxury Villas STX ibekwe kwindawo enehektare ezi-3 ngaphezulu kwe-Little Princess Hill Estate ekhethekileyo. Ipropathi ikhuselwe ngamasango amabini okungena, ikhamera yevidiyo yokhuseleko lwangaphandle, kwaye ikunika indawo epholileyo nepholileyo ebekwe kwindawo yetropiki.
I-estate yonke ineembono ze-180 degree of the North, East, and South shores kwaye ineembono ezilungileyo ze-Christiansted Harbor, i-Buck Island, i-Green Key, kunye ne-Hotele yethu e-Cay. Ukuba ungumntu ovuka kusasa, uyakonwabela ukuphuma kwelanga okumangalisayo ukusuka kumgangatho wedama!
Le propathi yenzelwe abo bajonge ukubaleka kubomi besixeko, ngelixa besonwabela impepho epholileyo ngelixa besonwabela isiselo esijonge ezona mbono zilungileyo kwesi siqithi.
Imizuzu emi-5 kude neevenkile zegrosari
Imizuzu emi-6 kude nolwandle
Imizuzu eyi-10 kude nedolophu yaseChristiansted kunye nayo yonke imisebenzi yamanzi (iBuck Island, iilwandle zabucala, iParasailing, iScuba Diving)
Imizuzu eyi-8 kude neDowntown Boardwalk (Iindawo zokutyela, iiBar, uBomi basebusuku)
Imizuzu emi-6 evela kwiziko loKhathalelo oluKhawulezileyo
Zonwabele zonke izinto eziluncedo zesi siqithi kwaye ubuyele ekhaya ngaphantsi kwemizuzu eli-15 ukuze ukonwabele indawo epholileyo ye-Oasis Luxury Villas STX.
Unokusindwendwela @OasisLuxuryVillasSTX okanye 13 Princesse Hill Estate kwincwadi yoBuso.
Umbuki zindwendwe ngu- Ganesh
Sifumaneka 24/7 ngokusebenzisa iiseli zethu kwaye siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Ukuqhelaniswa nepropathi kubonelelwe ekungeneni kwaye kuhlala kukho into yokuzonwabisa elinde undwendwe ngalunye ekufikeni kwayo!
Umphathi wepropathi ekwisiza uphezulu ujongana nazo zonke iimfuno zakho zogcino.
Sifumaneka 24/7 ngokusebenzisa iiseli zethu kwaye siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Ukuqhelaniswa nepropathi kubonelelwe ekungeneni kwaye kuhlala kukho int…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sion Farm